Sina Hexaphenoxycyclotriphosphazene fanamboarana sy orinasa | Mingxing
Votoatiny: ≥ 99%
Hexaphenoxycyclotriphosphazenemanana rafitra P, n hybrid tsy manam-paharoa, mampiseho fiorenan'ny hafanana avo, fiaretana amin'ny lelafo, index index oxygen (LOI) avo lenta ary fihenan'ny setroka ambany setroka. Izy io dia mpamono afo tsy misy halogen-additive. Ampiasaina be amin'ny resin epoxy izy io, ny laminate varahina mitafy, ny diode emitting light, ny fonosana vovoka, ny potting material ary ny polymer material. Izy io dia karazan-fitaovana maharitra miaro afo sy mamono tena
Ity vokatra ity dia mpamono afo tsy misy halogen-additive, izay ampiasaina amin'ny PC, resin PC / ABS, PPO, nylon ary vokatra hafa. Rehefa ampiasaina ao amin'ny PC ity vokatra ity, raha 8-10% ny atiny hpctp, dia mahatratra FV-0 ny tahan'ny retardant amin'ny afo; ity vokatra ity koa dia misy effet retardant mirehitra tsara amin'ny reso epoxy, ary azo ampiasaina hanomanana ny EMC ho an'ny fonosana miharo tambatra marobe, ary ny fahombiazany amin'ny fandoroana ny lelafo dia tsara lavitra noho ny an'ny rafitra fantsom-boalavo bromine nentim-paharazana; ity vokatra ity dia azo ampiasaina amin'ny lamina vita amin'ny vera Benzoxazine Resin, ary rehefa 10% ny atiny hpctp dia mahatratra FV-0 ny tahan'ny lelafo ka mahatratra FV-0 ny vokatra azo ampiasaina amin'ny polyethylene, ny lanjan'ny LOI an'ny fitaovana polyethylene retardant mirehitra dia mety hahatratra 30 ~ 33 ; ny vokatra dia azo ampiana amin'ny viscose fibres spinning solution hahazoana fibre viscose retardant mirehitra miaraka amin'ny index oxidation an'ny 25.3 ~ 26.7
Ity vokatra ity dia karazana fitambarana miaraka amin'ny P sy N ho toy ny taolana fototra. Milamina ny firafiny, ary tsy misy olana mandoto halogen. Rehefa may izy dia tsy misy entona misy poizina ary tsy misy loza faharoa.
Azo ampiasaina amin'ny solvent solika ihany koa izy io, ary maharitra mandritra ny fotoana maharitra ny hafanana ambony, ny rano ary ny diloilo.
Izy io dia manana faharetan'ny lelafo tsara ary kely ny fanampiana. Amin'ny ankapobeny, raha 8-10% ny atin'ny BDP, dia mety hahatratra ny FV-0, 50% ny BDP sy ny RDP, ny mari-pahaizana maharitra maharitra amin'ny vokatra.
Noho ny firafitra miorina sy ny kely ampiana, ny toetran'ny vokatra sy ny akora hafa dia tsy miova mandritra ny fampiasana.
Crystal ity fotsy ity. Tsy mila hafanaina mandritra ny fampiasana azy io, ary tsy mila fonosana manokana ho an'ny fitaterana. Mety kokoa amin'ny fampiasana sy fitaterana izany.
Fonosana: 20kg / kitapo
Fitandremana fitehirizana: mitahiry ao amin'ny trano fanatobiana mangatsiaka, maina ary misy rivotra.
Fahaiza-manao isan-taona: 500 taonina / taona
Teo aloha: DOPO-HQ
Manaraka: Phosphazene poly (diphenoxy)
Phosphazene poly (diphenoxy)